Axsaabta Somaliland oo ka wada hadlaya khilaafka ka dhashay muddo kordhinta xukuumadda Siilaanyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 May 2015 21 May 2015
Hargeysa: Magaalada Hargeysa waxaa si rasmi ah uga furmay wadahadallo u dhaxeeya xisbiyada Mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID iyo xisbiga taladahaya ee KULMIYE iyo xukuumadda oo isku dhinac ah.
Shirka waxaa Furay Madaxwayne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdillahi Ismaaciil Saylici.
Wada hadalladan waxaa dhinaca xisbiga talada haya hogaaminaya gudoomiye Muuse Biixi Cabdi, dhinaca xisbiyada mucaaradka ee WADDNI iyo UCID waxaa hogaaminaya labada gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillahi Cirro iyo Faysal Cali Waraabe.
Golaha Guurtida Somaliland, fadhi Goluhu Guurtidu uu 11-kii bishaan May ku yeeshay Hargeysa, ayuu ku go’aamiyay in Xukumadda iyo Wakiilada loo kordhiyo muddo dhan 1 sanno iyo 10 bilood.
Muddada Madaxweynaha iyo wakiilada ayaa ku eekaan doonta 27-ka April 2017, sida Golaha Guurtidu go’aamiyey, waxaana arrintaas aad uga carooday xisbiyada mucaaridka ah ee WADANI iyo UCID.